Qhagamshela iithayile zombala ofanayo .Qhagamshela., Umdlalo omtsha we-Android | I-Androidsis
Qhagamshela. yiphazili entsha apho kuya kufuneka udibanise iithayile zombala ofanayo
Siphume kwidabi lokulwa, amaqonga okanye imidlalo yokuqhuba ukuya kuyo Qhagamshela., Isihloko esitsha se-Android esiyiphazili ukuphumla kakhulu kwaye apho kufuneka sazi ukuba sizidibanisa njani iithayile zombala ofanayo. Umdlalo we-Android obonakala ngokukhulelwa kwayo okulula, kodwa oko kuya kuba nakho ukonwabisa iintsuku ezininzi.
Kwaye oku ikakhulu kungenxa ye- inani elikhulu lamanqanaba enayo kunye nobunzima bayo obuphezulu. Nangona ekuqaleni kuya kuba lula, njengoko amanqanaba ehamba, kuya kufuneka sibe nobuchule ekuwagqibezeni kwelona nani lincinci lokuhamba. Ngamanye amagama, asinakwenza ntshukumo ingalunganga ukuba sifuna ukudlulela kumceli mngeni olandelayo.
1 Iithebhu ezibomvu neziluhlaza kuXhuma.
2 Tshatisa iithayile kwaye ugqibe onke amanqanaba ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo
3 Iphazili elula nenomdla
Iithebhu ezibomvu neziluhlaza kuXhuma.
Kwaye kulapho sifumana khona ukuqondakala ngokulula koQhagamshelo sineentlobo ezimbini zeetshiphusi iya kuphazamiseka. Injongo yethu iya kuba kukukhetha omnye ukuba acinezele omnye aze ke atshintshe indawo yabo. Ngale ndlela sinokuzihambisa ukuba sinenani elifanelekileyo leentshukumo, nangona sisoloko sinombono omiselweyo wokuba kufuneka sigcine zonke iintshukumo ezinokubakho ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Eyona njongo iphambili kukuba kwelinye icala sineethayile zombala ofanayo nakwelinye icala ezichaseneyo. Oko kukuthi, kufuneka misa zonke iintshukumo zokuthatha isigqibo Ukuba kufuneka sihambise zonke iithayile eziluhlaza sasekhohlo, ngelixa ezibomvu ziya ngasekhohlo.
Ngokwenani lokuhamba kwemida esinayo, kufuneka sizophule iintloko kancinci ukwenza intshukumo yokuqala kwaye oku kusenza sikwazi ukusondela kwitshiphusi ebomvu okanye eluhlaza okwesibhakabhaka kwelinye icala okanye kwelinye lesikrini. Kwaye kuba ziya kubonakala zonakele, sicebisa ukuba uthathe lonke ixesha emhlabeni ukuvavanya. Nangona uya kuhlala unokhetho lokuzama nokuzama de ufumane olona manyano.
Tshatisa iithayile kwaye ugqibe onke amanqanaba ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo
Qhagamshela. unayo iindlela ezimbini zomdlalo. Kwelinye icala sinengqondo apho kufuneka silumke kakhulu ukusuka kwintshukumo yokuqala esiza kuyenza, kunye nokuphumla, apho singazikhathazi ngokuhamba, kodwa sonwabele ukudlala le phazili umdlalo waphoswa esofeni endlwini yakho.
Kwaye yile nto sinayo iyonke ngaphezu kwama-170 amanqanaba ayilwe ngesandla ukuze ube nomceli mngeni kwimihla ngemihla kwaye ukhatshwa ngumculo woqobo kunye nezandi ezibethayo ukuze iselfowuni ngokwayo ibe ngamava okuzonwabisa.
Sithetha ngayo umdlalo okwiVenkile yokuDlala kuGoogle iintsuku, ke sicebisa ukuba uzame. Ingakumbi kuba isimahla, nangona ine-micropayment yokuphelisa intengiso. Sele siyazi ukuba yintoni le kwaye i-freemium ngoku ingaphezulu kwenani lemidlalo enokubakho kwi-Google Play Store; inyaniso INintendo ikhuthaze abaphuhlisi bayo ukufaka ngaphezulu kokudlala kunye nomgangatho wemidlalo yabo kunendlela yokwenza imali ngayo.
Iphazili elula nenomdla
Okokugqibela sishiyeke no Qhagamshela. njengomdlalo omtsha we-android ebonakaliswa ngokulula, ukuba nembonakalo ebonakalayo elula kakhulu kwaye nenani elikhulu lamanqanaba onokuyonwabela mihla le. Mhlawumbi siyaphoswa ziindawo ezahlukeneyo, ukubanakho ukwenza iziqwenga ngokwazo okanye nokuba umbala wombala utshintshe, kodwa njengoko injalo yanele ukusonwabisa.
Ngokobuchwephesha kulungile nangona kunjalo ngaphandle kobumnandi obuninzi ngaphandle kwento ebonakalayo izimisele kwaye imbeka kwindawo ekhethekileyo. Asifumani manqaku aphikisayo naphina, ke ngoko ukulungele ukuyonwabela.
Qhagamshela. iza kwiVenkile yeGoogle Play njengephazili elinomdla apho kuya kufuneka udibanise iithayile ezahlukeneyo ukuba nombala ngamnye kwicala elinye lesikrini.
Amanqanaba okwenziwa ngesandla
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Qhagamshela. yiphazili entsha apho kuya kufuneka udibanise iithayile zombala ofanayo
Ukuhlaziywa kwe-Samsung Galaxy A8 + (2018) kwi-Android Pie
Isamsung inika iinyanga ezi-6 zokuBhaliswa kwePremiyamu yeSpotify kubathengi beGPS S10